DBMS ट्यूटोरियल - डाटाबेस ट्यूटोरियल र अवधारणा
DBMS ट्यूटोरियल वा डाटाबेस ट्यूटोरियल मा बिभिन्न विषयहरु हुन्छन् जसले तपाईलाई डेटाबेस अवधारणाहरु मास्टर गर्न मद्दत गर्दछ र तपाइँ तपाइँको पाठ्यक्रम को लागी DBMS सिक्न सक्नुहुन्छ। यो ट्यूटोरियल एक रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ट्यूटोरियल पनि हुन सक्छ।
यस ट्यूटोरियलमा, हामी DBMS को अवधारणाको विस्तृत रूपमा कभर गर्नेछौं। निम्नलिखित DBMS को मुख्य विषयहरू छन् जसले हामीलाई डाटाबेस प्रबन्धन प्रणालीको अवधारणाहरू खाली गर्न मद्दत गर्दछ।
डाटाबेस के हो?
नाम नै यो के हो संकेत गर्दछ। डाटाबेस एक स्थान / कन्टेनर हो जहाँ सबै डाटा भण्डारण हुन्छ। तर डाटा के हो? डाटाबेसमा, जानकारीको साना टुक्रा डाटा पनि हुन्छ। उदाहरण को लागी, विद्यार्थी डाटा हो, कोर्स डाटा हो, र रंग डाटा, उचाई, तौल, खाना सबै डाटा हुन्। संक्षेप मा, सबै जीवित र निर्जीव यस संसारमा वस्तुहरू डाटा हुन्.
हामीलाई डाटा किन चाहियो?
हामीलाई डाटा चाहिन्छ ताकि हामी तिनीहरूमा विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छौं। भन्नुहोस्, हामीसँग कुनै डाटाबेस छैन र हामी एक वर्षमा बच्चाको उचाई र तौल के हो रेकर्ड गर्न चाहन्छौं। हामी के गर्छौं यसलाई प्रत्येक महिना कागजको एक टुक्रामा नोट गर्नुहोस्। निश्चित अवधि वा बर्षको अन्त्यमा हामी जाँच गर्छौं कि ऊ / उनी सही रूपमा बढ्दै छन भने। यदि केहि प्रविष्टि गलत वा अप्रासंगिक हो, हामी यसलाई सुधार गर्छौं वा बन्द गर्छौं। डाटाबेसको प्रयोग गरेर पनि यस्तै गरिन्छ। हामी डाटाबेसमा यो सबै जानकारी भण्डारण हुनेछ। यदि हामी वृद्धि जाँच गर्न चाहान्छौं भने हामी डाटाबेसबाट जानकारी तानिरहेका छौं, यदि हामीले कुनै सूचना परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने, हामी अपडेट गर्न / मेटाउन सक्दछौं। तर सबै डाटा एक ठाउँमा हुनेछन् - डाटाबेस।
डाटाबेसमा कस्तो प्रकारको डाटा भण्डार गरिएको छ?
डेटाबेसमा, हामी केवल सम्बन्धित डेटा सँगै समूह गर्दैछौं र तिनीहरूलाई टेबलको नामले एक समूह नाम अन्तर्गत भण्डारण गर्दैछौं। यसले कुन डाटा कहाँ भण्डार गरिएको छ र कुन नाम अन्तर्गत पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। सम्पूर्ण डेटाबेसमा विशेष डेटा खोजी गर्न यसले समय कम गर्दछ। उदाहरण को लागी, विद्यार्थी, शिक्षक, वर्ग, विषय, कर्मचारी, विभाग, आदि व्यक्तिगत टेबल बनाउँछ।
र कसको लागि यी डाटा भण्डारण गरिएको छ?
हामी केवल सम्बन्धित डाटा भण्डारण गर्दछौं - एउटा विशेष आवश्यकता / अनुप्रयोगसँग सम्बन्धित। उदाहरण को लागी, विद्यार्थी डेटाबेस - यसमा उसको आईडी, नाम, जन्म मिति, कक्षा, कक्षा, इनामहरू सम्मको विद्यार्थीहरूको सबै जानकारी हुनेछ जुन विशेष कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
विशेष डेटाबेसमा राख्न कुन डेटा उपयुक्त छ भनेर हामी कसरी निर्धारण गर्ने?
यो सबै हामी कुन डाटाबेसमा विकास गर्दैछौं, र यसको सहि आवश्यकता / उद्देश्य के हो त्यसमा निर्भर गर्दछ। भन, हामीलाई आवश्यक छ कलेज डाटाबेस सिर्जना गर्नुहोस्। कलेज डाटाबेस के हुन सक्छ? पहिलो कुरा यो हो कि हामीले कलेज जानकारी भण्डार गर्नु पर्छ जस्तै यसको नाम, ठेगाना। त्यसपछि त्यो कलेज, स्टाफ र उनीहरूको विवरणहरू, विद्यार्थीहरू र उनीहरूका विवरणहरूमा प्रस्तुत कोर्सहरू आउँछन्। तर के हामी यी सबै जानकारीहरू एक टेबल अन्तर्गत भण्डार गर्छौं - कलेज? के डाटाबेस डाटा प्राप्त गर्न वा यसलाई अपडेट गर्न द्रुत हुनेछ? पक्कै छैन! यदि सबै चीज एकल टेबलमा भण्डारण गरिएको छ भने यो अराजक हुने थियो। यसैले उनीहरूले केहि नियम प्रस्तुत गर्दछन् डाटाबेस प्रबन्ध गर्नुहोस् - सम्बन्धित डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली (RDBMS)। आरडीबीएमएस एक प्रोग्राम हो जुन हामीलाई डेटाबेस बनाउन र यसलाई कसरी मर्मत गर्ने मार्गदर्शन गर्दछ। यसले हामीलाई बताउँछ कि सम्बन्धित जानकारीलाई बिभिन्न टेबुलमा कसरी विभाजन गर्ने र उनीहरूलाई अन्तरसम्बन्धित गर्नुहोस् ताकि हामी सबै सम्बन्धित डाटा सजिलै र प्रभावकारिता छनौट / घुसाउन / अपडेट / मेट्न सक्दछौं।
यो DBMS ट्यूटोरियल विद्यार्थीलाई डाटाबेस अवधारणा बुझ्न मद्दतको लागि लेखिएको हो।
अर्को लेखहरूमा हामी डाटाबेस ट्यूटोरियल (डाटाबेस म्यानेजमेन्ट ट्यूटोरियल) विभिन्न शीर्षकहरूमा जान्छौं।
डाटाबेस प्रबंधन ट्यूटोरियलहरू
डाटाबेस प्रबन्ध ट्यूटोरियलका लागि शीर्षकहरूको सूची यहाँ छ।
DBMS को संरचना र डाटाबेस व्यवस्थापन प्रणालीको डाटाबेस संरचना
फाइल प्रशोधन प्रणाली
DBMS मा तालिकाहरू
DBMS मा हेराईहरू
DBMS मा मटेरियलाइज्ड दृश्य
डाटा परिभाषा भाषा - DDL
डाटा हेरफेर भाषा - DML
डाटा नियन्त्रण भाषा - DCL
लेनदेन नियन्त्रण भाषा - TCL
DBMS मा डाटा मोडेलहरू
वस्तु आधारित डेटा मोडेल
भौतिक डेटा मोडेलहरू
डाटा आधारित मोडेल रेकर्ड गर्नुहोस्
ER डाटा मोडेलको आधारभूत अवधारणा
ER डाटा मोडेल
ईआर रेखाचित्रलाई टेबलमा रूपान्तरण गर्नुहोस्
डाटाबेस प्रयोगकर्ता र प्रशासकहरू
प्रासंगिक क्वेरी भाषाहरू - सम्बन्ध सम्बन्धित बीजगणित
रिलेशनल क्याल्कुलस - ट्युपल रिलेशनल क्याल्कुलस - डोमेन रिलेशनल क्यालकुलस
DBMS मा फाईल संगठन
DBMS मा अनुक्रमिक फाइल संगठन
DBMS मा हिप फाईल संगठन
DBMS मा ह्यास / प्रत्यक्ष फाइल संगठन
अनुक्रमणिका अनुक्रमिक पहुँच विधि (ISAM)
B + ट्री फाइल संगठन
क्लस्टर फाईल संगठन DBMS मा
डाटा शब्दकोश र डाटा शब्दकोशका प्रकारहरू
संरचना, दृश्य र डाटा शब्दकोशको आर्किटेक्चर
प्रकार्यहरू, फाइदा र डाटा शब्दकोशको हानी
अनुक्रमणिकाको आधारभूत अवधारणा - क्रमबद्ध सूचकांक
B + रूख र विस्तारहरूको अवधारणाहरू - B + र B रूख सूची DBMS मा फाइलहरू
बहु कुञ्जी पहुँच
बिटमैप सूचकांक, फाइदा र हानि
DBMS मा सम्बन्ध सेट अपरेटरहरू
DBMS मा कोडको नियम
DBMS मा सामान्यीकरण
पहिलो सामान्य फारम (१NF)
दोस्रो सामान्य फारम (२NF)
तेस्रो सामान्य फारम (Nएनएफ)
Boyce-Codd सामान्य फारम (3.5NF) - BCNF
चौथो सामान्य फाराम (4NF)
पाँचौं सामान्य फाराम (NNF)
सामान्यीकरण र डाटाबेस (DBMS) मा डे-सामान्यीकरण बीचको भिन्नता
डाटाबेस लेनदेन (DBMS)
DBMS मा Concurrency नियन्त्रण
डाटा ब्याकअप र DBMS मा पुन: प्राप्ति
DBMS मा अपवाद
DBMS मा ट्रिगरहरू
डाटा प्रकारहरू र DBMS मा भेरिएबलहरू
DBMS मा अपरेशन चयन गर्नुहोस्
DBMS मा NULL मानहरू
DBMS मा क्रमबद्ध गर्दै
DBMS मा एकत्रीकरण
DBMS मा अपरेशनमा सामेल हुनुहोस्
DBMS मा सब प्रश्नहरू
DBMS मा सहसंबंधित उप प्रश्नहरू
DBMS मा संघ
DBMS मा माइनस
DBMS मा Intersect
DBMS मा पुन: नामाकरण गर्नुहोस्
DBMS मा भिन्नता
DBMS मा मनपर्‍यो
DBMS मा Rownum
DBMS मा ससर्त नियन्त्रण
DBMS मा केस कथन
DBMS मा कर्सरहरू
DBMS मा प्रश्न प्रसंस्करण
DBMS मा चयन एल्गोरिथ्म
DBMS मा फाइल स्क्यान
DBMS मा सूचकांक स्क्यान
कन्जेक्शन्स, डिसजेन्सन र DBMS मा नकारात्मक
DBMS मा सामेल हुन्छ
DBMS मा नक्कल उन्मूलन
DBMS मा समूहीकरण गर्दै
DBMS मा अपरेशन सेट गर्नुहोस्
बाहिरी DBMS मा मिल्छ
जटिल DBMS मा मिल्छ
DBMS मा अभिव्यक्तिको मूल्यांकन
DBMS मा प्रासंगिक अभिव्यक्तिको रूपान्तरण
DBMS मा समता नियम
DBMS मा क्रमबद्ध विधि
DBMS मा क्वेरी अनुकूलन
DBMS मा मटेरियलाइज्ड दृश्य (MV)
DBMS मा मूल्यांकन योजनाहरु
DBMS मा अभिव्यक्ति को नतीजाहरूको तथ्या .्क अनुमान
DBMS मा आकार अनुमान (चयनता)
DBMS मा अपरेटर मूल्यांकनको प्रविधि
DBMS मा मूल्यांकन योजना को छनोट
DBMS मा डाटाबेस लेनदेन
DBMS मा लेनदेन प्रबन्ध अवधारणा
DBMS मा लेनदेन मोडेल
DBMS मा तालिका
लेनदेन आणविकता र DBMS मा टिकाउपन
DBMS मा लगहरू
अगाडि लेख्नुहोस् DBMS
DBMS मा छाया डाटाबेस
DBMS मा भण्डारण संरचना
DBMS मा डाटा पहुँच
DBMS मा डाटा ब्याकअप
DBMS मा डाटा रिकभरी
DBMS मा छाया पृष्ठांकन
DBMS मा समवर्ती लेनदेनको साथ रिकभरी
DBMS मा उन्नत रिकभरी टेक्निकहरू
DBMS मा लेनदेन अलग
DBMS मा लेनदेन अलगाव स्तर
DBMS मा लेनदेन Serializability
DBMS मा लेनदेन अलगाव कार्यान्वयन
DBMS मा डेडलक ह्यान्डलिंग
DBMS मा सम्मिलित SQL
DBMS मा डाईनामिक SQL
DBMS मा कागजात डाटाबेस
DBMS मा XML डाटाबेस
DBMS मा XPath
DBMS मा XQuery
DBMS मा डाटाबेस प्रणाली वितरण गर्नुहोस्
DBMS मा डाटा विखंडन
DBMS मा वितरित क्वेरी प्रशोधन
DBMS मा वितरित कन्जुरेन्सी
DBMS मा Oracle मा डाटाबेस सिर्जना गर्दै